Qarax miino oo lagu dilay Taliyihii qeybta 12’ka April Janaraal Cumar Dheere – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaQarax miino oo lagu dilay Taliyihii qeybta 12’ka April Janaraal Cumar Dheere
Qarax miino oo lagu dilay Taliyihii qeybta 12’ka April Janaraal Cumar Dheere
06/12/2018 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Wararka naga soo gaaraya degaanka Dhanaane ee Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in kolonyo gaadiid ah oo ay wateyn ciidamada xooga gaar ahaan qeybta 12’ka April uu qabsaday Qarax Miino oo wadada hareeraheeda lagu aasay.
Wararka ayaa intaas ku daraya in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen Taliyihii qeybta 12’ka April Janaraal Cumar Dheere iyo abaanduulihi isla qeybtaasi Cabdi Cali Jamaame.
Qaraxaani ayaa qabsaday gaariga ay wateyn Taliyaha iyo Abaanduulaha qeybta 12’ka April ee ciidamada xooga waxaana sidoo kale ku geeriyooday ilaaladaooda ee gaarigaasi saarnaa oo gaaraya ilaa Todobo.
Ciidan gurmad ah oo ka baxay magaalada Muqdisho ayaa soo qaaday meydadka iyo dhaawacyada ciidamadaan qaraxa lala eegtay.
Al Shabaab ayaa shaaciyay in ay iyagu leeyihiin masuuliyada qaraxaani waxaana waayihii dambe ay kordhiyeen qaraxyada nuucaan oo kale ah ee wadooyinka hareeraheeda ku aasaan.
Dhanka kale wali dowlada Soomaaliya wax fah faahiin ah maysan ka bixin qaraxa lagu dilay taliyaal iyo abaandulaha 12 April.
Wafdi uu hogaaminayo Gudoomiyaha Aqalka Sare oo gaaray magaalada Kismaayo